Ifulethi elinomoya kwidolophu yakudala yaseLviv
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguTetiana & Mark
Wamkelekile ukuba uhlale kwigumbi lethu elipholileyo elinokulungiswa okutsha entliziyweni yedolophu endala! Mna nomyeni wam sihamba kakhulu kwaye sityale onke amava ethu obuqu kule ndlu. Sazama ukwenza indlu ikhululeke kwaye ibe ntle.
Yonke ifenitshala yintsha, ibhedi ekhululekile kunye ne-orthopedic mattress, iindawo zokuhlala zicingelwa kwiinkcukacha zokugqibela. Ikhitshi elincinci linayo yonke into oyifunayo ukupheka, ifriji, isitovu.
Kukho ibalcony ekwabelwana ngayo enendawo yokutshayela.
Siya kuvuya ukukubona!
Indlu ixhotyiswe ngonxibelelwano lwangoku:
unlimited Wi-Fi, SmartTV, free Netflix, ukufudumeza ngamnye.
Phambi kwendlu yethu kukho ikhefi entle, ebonelela ngesidlo sakusasa esimnandi kunye nekofu ukusukela ngentsimbi yesi-9:00 kusasa.
Umbuki zindwendwe ngu- Tetiana & Mark
Sinxibelelana neendwendwe zethu 24/7.
UTetiana & Mark yi-Superhost